musha FOOTBALL ANOKOSHA Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Elite inonyanyozivikanwa nezita rezita rokuti "Mambo". Our Michel Platini Childhood Story pamwe neSepold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva ino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Our Micheal Platini nhau ndeimwe chiitiko chinonakidza chinokutora iwe parwendo rwekumuka kwake kubva pakusvibisa kusvika mukurumbira pamwe nekuguma kusuruvara kwekufambira mberi kwaakaita makore. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Michel François Platini akaberekwa musi we 21 pazuva raJune 1955 paJoeuf, France. Akaberekerwa nababa vake, Aldo Platini uyo panguva yekuberekwa kwake aiva mudzidzisi uye mutambi wenhabvu. Kune rumwe rutivi amai vaMichel, Anna Platini aiva bartender kuBar des Sportifs iyo inoshandura semutambo wemitambo. Mhuri yepakati-kati yemhuri yevabereki vake inoratidzira kuzvininipisa kweMichel.
Kukura mumhuri yepakati-duku Michelin - savana vakawanda venguva yake - vakatora baba vake vachida kutamba mitambo, yebhola uye vakabvumidzwa kutamba bhora rekumugwagwa kuchikoro chinotyisa.
Yakanga isati yava nguva refu asati ava mukurumbira pakati pezera rake uye akatora zita rake rokutanga uye risina mbiri "Peleatini"Mukucherechedza kurumbidzwa kwaakaderedzwa pamusoro pake kubudirira kwake kwepamberi.
Zvinoshamisa pakati pehutano hwehuduku hwaaiva nazvo hwaiva kukwanisa kwake kutinhira mabheji ebhora iro vavakidzani vekumusha kwake vaifunga kuti kune ngozi kune upenyu uye nzvimbo.
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Inoshaya Mwoyo Kutsemuka
Kunyange zvakadaro, Michel akanga ane hanya nezvese ibhola raive naro mumatokari uye akaita zvakanakisisa kumutambo wacho. Mushure mokuwana makore akawanda ane ruzivo mumutambo wemugwagwa, Michel akaisa chikepe kune unyanzvi hwekushandira paC FC Metz asi akarambwa nekambani iyo isina mhosva yakamuona iyewo asingakwanisi kutamba bhora pamusana pokuti mwoyo usina simba.
Vechidiki uye vane chido, Michel akanga asiri mumwe munhu aizotendera mukana wekudarika neminwe yake. Akapikisa pamusoro pokuramba kwake nekambani uye akapiwa mukana wokuratidza simba rake kwete pamunda wekutamba asi nekuputira mhepo mumushandisi unoshandiswa nechiremba wevanyanzvi akabatwa ne FC Metz.
Asingadi kupa mukana wacho, Michel akapa muedzo kupfuura zvakanakisisa uye akaora mwoyo maminitsi mashomanana gare gare, rubatsiro chiremba akatora sechisimbiso chekutaura kwake kusina simba uye kururamiswa kwekuramba.
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Career Buildup
Akadengenyeka, akapwanyika asi asina kuvhara, Michel akasarudza zvidimbu zvehupenyu hwake ndokupa bhodhi rebasa rimwezve pfumo pachikwata aive nechivimbo chokugamuchirwa semoyo wake usina simba wakanga usingakwanise kumira umwe kurambwa.
Ndeipi mamwe makiragi angakwanisa kuvimbisa kupfuura AS Nancy uko baba vake vakashanda senhengo yebhola yebhola rekutonga?.
Sezvo zvinhu zvaizotanga kubuda, chirwere chisina kururama chekuongorora chirwere cheMetz club chikava mukana wakaisvonaka wevakidzani vemakwikwi uye vaikwikwidza AS Nancy Lorraine apo Michel akaisa miitiro inofadza iyo yakamuona iye akava mutamba akakurumbira kana chikwata chechikwata.
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Yakanga iri pa AS Nancy kuti Michel akave ane unyanzvi hwokupedza uye kusununguka kusununguka, uyewo kukwanisa kukwanisa kugumisa, kuisa 98 zvinangwa muC181 mutsara. Pakutanga kwemakore 21, Mitchel akaita nyika yake yepamusoro yeFrance apo mamwe maZimbabwe eCzech akabatwa nehasha yake.
Mafungu ekurumbira akauya kuzisuka apo Michel semutambo paJuventus (mushure mekubudirira kwepelisi paState Etienne) akawana chirango uye kukunda chinangwa chaipikisana neLiverpool iro rakaona rutivi rwake ruchisimudza European Cup. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Ukama hupenyu
Panova nemukadzi mumwechete munyaya yaMichel Platini yerudo uye anozova mudzimai wake Christelle Bigoni.
Michel akanga achiri kutamba sa AS Nancy paakasangana nemudzimai wake Christelle, uyo aive mudzidzi wezvinoitika mune zvezvakatipoteredza. Akanga ariwo mutambo achida uye asingatongotauri kuti aonekwe nemurume wake mune zvakasiyana-siyana.
Vakaroora vakaroorwa mu1977 uye vakaramba vakaroorana kubva ipapo.
Kubatana kwavo kunokomborerwa nevana vaviri, Laurent Platini uye marine Platini.
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Heysel Stadium yenjodzi
Nhandare yemuHeffers yakange iri kupesana pakati pevamwe veLiverpool neveJuventus, avo vakaona iyo yekupedzisira yakamhanyira kumadziro akazoguma. Chiitiko chakaipa chakaitika pa 29th yaMay 1985, akatungamirira kurufu rwevanhu 39-kunyanya maItaly uye vhudzi veJuventus- panguva imwechete 600 vamwe vakakuvara.
Nhaurirano yakaitika musi iwoyo uye nzvimbo iyo Michel Platini akawana chirango uye kukunda chinangwa chairwisana neLiverpool kuti apiwe chikwata cheEuropia chakaita kuti vazhinji vafungidzire Michel Platini sevasingadi kupemberera chinangwa chake chinokunda pasinei nekurasikirwa noupenyu zvakanyorwa pazuva risingaiti.
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Post-Professional Football Endeavors
Michel Platini akasiya basa kubva mumutambo wepamutambo paakanga akwegura 32 muna June 1987. Mwedzi miviri mushure mokunge apedza basa, akatora basa rekudzidzira semutungamiriri weFrance National side mu1988 uye akaona kuti boka rake rakakwanisa kuwana 1992 European Championship pamwe chete nekunakidza kwekutsvaga mitsara yose yemasere masere.
Pakati pe1988 kusvika ku2006 Michel akabatana neEFAFA neFIFA zvishandiso, achishanda pasi pemakomiti akasiyana kusvikira iye ari mu2006, akarwisana uye akakunda Lennart Johansson panzvimbo yepamusoro yeEustre Presidency.
Platini's presidency tenure yakagadzirirwa makore 8, mazuva 255, nguva yakanga yakasiyana zvikuru neyaka 16 makore ekutanga kwake, Lennart Johansson. Chii chingave chakaita kuti chiFrench chinopedza nguva yake semutungamiriri weEFAFA; chido kana chikonzero ?.
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Yakabatanidza Kubatana Kunokanganisa
Platini aida kudzosera mutungamiri weFIFA, Sepp Blatter uyo akazvitsaurira muna 2015, kunyange zvakadaro, duo (Platini naBlatter) vakatongerwa mhosva yehuori, kusaruramisira, kukakavara kwechido, kuverenga kwenhema uye kusawirirana nekambani yemitemo yeFIFA.
Izvi zvakakonzera kuguma kwaPlatini's aspirational aspiration (sezvo akapiwa gwaro reC8-gore kubva pabhora raakaderedzwa kusvika makore 6), kupa nzira yeGianni Infantino uyo akapikisa uye akakunda nzvimbo yakakosha. Izvo zvakaitawo kuti asarudze sezvo ari mutungamiri weEFAFA mushure mekukundikana kwemakore matanhatu ekurambidzwa kwebhokisi rakaputsika.
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Other Facts
Platini akatamira kuJuventus muzhizha re 1976 yakanga isingashandisi chibvumirano asi mazita okubhadhara maererano nemutemo weFrance panguva iyoyo.
Akazadzikisa aive asingadikanwi yekuonekwa kunyika mbiri mumakwikwi enyika. (France uye Kuwait)
Iye anowanikwa katatu weBonon d'Or. Izvi zvakaitika mumakore; 1983, 1984 uye 1985.
Aive Zinedine Zidane childhood idol.
Munguva yake semutungamiri webhola, akanga achirwisana nekuendeswa kwevatambi vepasi-18, iyo yaanoona semutemo usingabvumirwi nekutengesa vana.
CHOKWADI KUTI: Tinotenda nekuda kweMichel Platini Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. PaHupenyuBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Gianni Infantino Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 3, 2020